နံပါတ်(၁) နှင့် နံပါတ် (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » နံပါတ်(၁) နှင့် နံပါတ် (၂)
နံပါတ်(၁) နှင့် နံပါတ် (၂)
Posted by စဆရ ကြီး on Apr 4, 2013 in Critic | 8 comments
” ကိုယ်ချစ်များ ချစ်မိနေသလား… မရေရာဘူး စိတ်ထဲမှာ…”
” ရန်သူငါးပါးထဲမှာ မညှာမတာ ဘယ်သူ့မှမထောက်ပါ သူခိုး ဓါးပြထက်ဆိုးတဲ့ရန်သူဟာ..”
ဒါလေးမှ ဟုတ်သလိုလိုရှိသွားတယ်… ကိုရင်ရှူံးတွေးမိသည်ကို သီချင်းဆိုမိခြင်းဖြစ်ပါ၏။
များမကြာမီမှာပင် ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် မြန်မာပြေလား မြန်မာပြည်လားမသိသည့် ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်သည်ဆိုသော မြေကြီးသို့ ပြန်ရောက်ရပေတော့မည်။ သို့သော်လည်း ရှိစေတော့၊ ၀င်ပေါက်တစ်ပေါက်တည်းသာ ရှိသည့်အတွက် ထိုဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်မှပင် ကိုရင်ရှူံးပြန်ရပေတော့မည်။ ကိုရင်ရှူံးနေထိုင်ရာ မြေကြီးတွင်မတော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ လူများ လာရောက်လုပ်ကိုင်ကြလေသည်။ နီပေါ၊ သီရိလင်္ကာ၊ အိန္ဒိယ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အီဂျစ်၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဆီးရီးယား၊ အီရန်၊ အိုမန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ ပါကစ္စတန် အစရှိသည်တို့မှ ဖြစ်သည်။ ထိုလူမျိုးများနှင့် နေ့စဉ်လိုလိုပင် ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရပါ၏။ သောကြာနေ့ဆိုလျင် နေ့လည် တစ်နာရီမှ အလုပ်ဖွင့်၊ အစ္စလာန် ကိုးကွယ်သူများအား ဘုရားဝတ်ပြုရန်ခွင့်ပေးနှင့် ထိုလိုနှင့်ပင် နှစ်ပေါင်း အတော်အတန်ကြာအောင် ကိုရင်ရှူံး နေထိုင်ခဲ့ပါ၏။ ခရစ်ယာန်များအတွက်မူ တနင်္ဂနွေ ပိတ်ရက်ရရေးအတွက် အတော်လေး တိုက်ခိုက်ယူရသလို ဟိန္ဒူများအတွက် သူတို့ရိုးရာ ပွဲတော်နေ့များတွင် ရက်မပျက်စေရေးအတွက်လည်း ကိုရင်ရှူံးတစ်ယောက် အတော်လေး စီမံခန့်ခွဲယူရပါ၏။
သို့ဆိုလျင် ဗုဒ္ဒဘာသာများအတွက် ဘာလုပ်မည်နည်းဟုဆိုလျင် ကိုရင်ရှူံး လက်ရှိအချိန်ထိ မည်သည့် လူမှ မရှိသောကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဒဘာသာများအတွက် သီးခြားနေ့ထူးရက်မြတ်များ သတ်မှတ်ရန် မလိုသောကြောင့်တစ်ကြောင်း မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ပြောစရာစကားမရှိခဲ့ပေ။ သူလဲ သူလိုရာယူ၊ ကိုယ်လဲ ကိုယ်လိုရာယူနှင့်ပင်၊ အတော်လေး အဆင်ပြေခဲ့ပါ၏။ သို့ဆိုလျင် ကိုရင်ရှူံး အဘယ်သူနည်းဟု ဆိုကြပေမည်။ ခရစ်တော်ကို အနည်းငယ်မျှ ပိုမိုယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အတွက် သမ္မာကျမ်းစာကိုသာ ပိုမိုအလေးထားမိသည်ကို ၀န်ခံရမည်ထင်။ သို့အတွက်ကြောင့် တစ်ခြား ယုံကြည်သူများကို နှိမ့်ချခြင်းရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ပေမည်။ သို့အတွက်ကြောင့် တစ်ခြားသူများ၏ ယုံကြည်စွာ ကိုးကွယ်ခြင်းကို ထိပါးနှောင့်ယှက်လိမ့်မည် ထင်ကြပေလိမ့်မည်။ ကိုယ့်ကို မထိပါး မနှောင့်ယှက်သမျှ ကိုရင်ရှူံးအဖို့ နေသာသမျှ လေညှာက ဗေဒါမပင်ဖြစ်ချေမည်တစ်မုန့်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်နှင့် ဗုဒ္ဒဘာသာ၊ ဗုဒ္ဒဘာသာနှင့် မွတ်စလင် လက်ထပ်ကြသည်များရှိသလို တစ်ခြားနိုင်ငံများတွင်မတော့ (အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန် နိုင်ငံများတွင်မတော့ ခရစ်ယာန်နှင့် မွန်စလင် ) လက်ထပ်ကြသည်များလည်းရှိသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ခရစ်ယာန်နှင့် အစ္စလာမ်ကိုးကွယ်သူများလက်ထပ်လျင်လည်း အစ္စလာမ်သာ ဖြစ်ရိုးထုံးစံရှိခြင်း၊ အစ္စလာမ်နှင့် တစ်ခြား ဘာသာကိုးကွယ်သူများလက်ထပ်လျင်လည်း အစ္စလာမ်သာ ကိုးကွယ်ရခြင်းဆိုသည်မှာတော့ ဖျောက်ဖျက်မရသည့် အမှန်တရားပင်။ သို့အတွက်ကြောင့်ပင်လေလားမသိ၊ မြန်မာပြည်မှ ကွန်ဆာဗေးတစ်များအားကောင်းလာသည့်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း အရေးပေါ်အခြေအနေများ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားခံရသည့်အတွက် ကိုရင်ရှူံးတို့လို မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာယူခြင်းဟု မှတ်ယူကြသည့် အချိန်ကာလတွင် အမင်္ဂလာဖြစ်သည့် အများပြည်သူ စိတ်အေးမချမ်းမသာဖြစ်နေရသည့် အချိန်တွင်မှ မင်္ဂလာပြန်ယူခြင်းသည် မင်္ဂလာမှ ရှိပါလေစဟု မေးမြန်းပြောဆိုကြသူများလည်းရှိပေမည်။ ရှိစေတော့.. မင်္ဂလာဆိုသည်မှ ယူတတ်မှ ရပေလိမ့်မည်။
ဆိုတော့ကာ… လိုရင်းကို ဆက်ရမည်ဆိုလျင် ကိုရင်ရှူံးမြင်မိသမျှ နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှ ကပြအသုံးတော်ခံနေသည်များကို ပရိသတ် တစ်ဦးအမြင်ဖြင့်သာ မြင်မိသည်များကို ဆက်ရပေတော့မည်။ သူတို့က ကပြအသုံးတော်ခံနေတော့လည်း ဇာတ်ပွဲဝါသနာရှင် ကိုရင်ရှူံးတို့လို ပရိသတ်များအဖို့လည်း မှီသမျှ ဥာဏ် တစ်ထွာတစ်မိုက်လေးမျှဖြင့် စဉ်းစားသုံးသပ်ရမည်ထင်ပါ၏။ ဘာပဲပြောပြော အသည်းကြားမှ မဲတစ်ပြားကို လာမည့် ၂၀၁၅ တွင်မတော့ ကိုရင်ရှူံး ပေးနိုင်လိမ့်မည်ထင်ပါ၏။
သို့ကလိုဆိုတော့ နံပါတ်(၁) ဘယ်သူများဖြစ်လိမ့်မည်နည်းဟု ထင်ကြပေမည်။ လက်ရှိ နံပါတ်(၁) နေရာမှ ပြောင်ကြီးပင်ဖြစ်ပေမည်။ နဂိုကတော့ ပဲစားသည့် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ကြီးပြင်းလာသူတစ်ယောက်အနေနှင့်လည်းကောင်း၊ တသခ တိုင်းမှူးလုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း၊ S1 လုပ်ခဲ့ဖူးသည်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်လည်းကောင်း နာဂစ်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် စိုင်ကော်လို့ ချုံပေါ်ရောက်ခဲ့သူတစ်ယောက်အနေနှင့်သာ မြင်မိသည်။ ဘာမှလုပ်ရည်ကိုင်ရည်လည်း မရှိလောက်ဟု။ များမကြာမီမှာပင် နိုင်ငံတစ်ကာမှ အတင်းအဖျင်းမီဒီယာများ၊ သတင်းမီဒီယာများ ထောက်ပြစရာမရှိအောင် နောက်ကြောင်းရှင်းခဲ့ရုံမျှမက လက်ရှိတွင်လဲ ခေါင်းပေါ်တွင် အတော်လေး ပြောင်ရှင်းနေသည့်သူကြီးမှ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးအနေနှင့် စကားတွေပြော၊ ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်၊ နိုင်ငံတစ်ကာသွား၊ အကူအညီတွေတောင်း၊ အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့ တစ်စာစာနှင့် တောင်းခံနေသည်ကို မြင်ရသည့်တစ်ခဏ တစ်ကယ်တန်း အလုပ်လုပ်မည့်သူပါလားဟု လေးစားခြင်းဖြစ်မိတော့သည်။ ပိုလေးစားသည့်အရာမှာ ကိုရင်ရှူံးတို့လို နိုင်ငံခြားသွား ကျွန်ခံနေရသူတွေအတွက် အခွန်တွေ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး၊ ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် အလကားရစ်သည့် ပုံစံ (၁၇) ခေါ် ငွေတောင်းနည်း ၇၁ မျိုးထက် မကသည့် အခွန်ရုံးမှ တောင်းခံခြင်းများကို ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်သည့်အတွက် အတော်လေး ကျေးဇူးတင်ရပေသည်။
ယခုနောက်ဆုံးအနေနှင့် တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် (၅၀၀၀) တန်လောက်သာ အိမ်မက် မက်ဖူးသည့် ဆင်းကဒ်များကို ၁၅၀၀ နှင့်သာ ရောင်းချမည်ဆိုသည့်အတွက်…
” ပြောင်.. ပြောင်… ပြောင် ပြောင် ပြောင်
ပြောင် ပြောင် ပြောင် ပြောင်”
ဟုသာ ရွှေစင်ကြော်ငြာအလိုက် ဆိုချင်တော့သည်။
သို့ဆိုလျင် နံပါတ်(၂)သာဆိုသည့်အတွက် အမေကိုးကွယ်ကြသူများ မနာလို၊မရှုစိမ့်၊ အတင်းအဖျင်းများ ပြောဆိုကြပေမည်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အနေနှင့်မူ နံပါတ်အတော်လေးများနေပေမယ့် အရှိအတိုင်းအရ နံပါတ်(၂)သာပေးချင်ပါသည်။ အစပထမတော့ သူမသည် နံပါတ်(၁)အဖြစ် အတိုက်အခံများကြားတွင် ရေပန်းစားပါ၏။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရတော့မူ ပြောင်ကြီးကို မသာနိုင်သည့်အတွက် နံပါတ်(၂)သာ ပေးလိုပါ၏။ ကိုရင်ရှူံးအနေနှင့် ဘွားတော်ဟုသာ ခေါ်ချင်ပါ၏။ သီဟနဲ့ တင်စိုးတို့ကောင်းမှုကြောင့် ဘွားတော်သည် ကုလားဖြူအား မည်သည့်အကြောင်းနှင့် ခင်ပွန်းတော်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်းထန်သူများ၊ ကွန်ဆာဗေးတစ်များ စစ်စစ် အမြင်တွင်မတော့မူ အမြင်မကောင်းပေ။ ရှိစေတော့၊ အမြင်မှန်ရလာပြီး အဖေ့ခြေရာနင်းသည်ဆိုဆို၊ အဖေ့တံခေါက်ခွက်နင်းသည်ဆိုဆို၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၁၉၈၈ မှစပြီး ယနေ့တိုင်အောင် တစ်စိုက်မက်မက်လုပ်လာသည်ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုရမည်ထင်။ ယခုနောက်ပိုင်း သူမကြောင့်ပင် မြန်မာကို ကမ္ဘာက ပိုအာရုံစိုက်လာသည်ကိုတော့ ငြင်းဆန်လို့ရနိုင်မည်မထင်။ ထို့အတွက်ကြောင့်ပင် အနောက်တံခါးမှ ဘင်္ဂါလီများအကြောင်း ဘာမှမပြောပဲ နှာစေးနေသည်ထင်၊ ဘာဆိုဘာမှမပြောပဲ တစ်ခွန်းသာပြောနိုင်ခဲ့၏။ လိုလားသူများမှ ထိုစကားတစ်ခွန်းကိုပင် အဟုတ်ကြီးလုပ်ပြောနေကြ၏။ အကျယ်ချုပ်မှ မလွတ်ခင် ထွေးခဲ့သည့် တံထွေးကို ပြန်မျိုချခဲ့သည်ကို မမှတ်မိသူများမှ လက်ခုပ်၊ လက်ဝါးများ တီးလျက်သားနှင့်၊ လက်ပန်တောင်းတွင်မှ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ကျခဲ့ရလေသည်။ သူမတစ်ယောက်တည်းကို အမှီပြုပြီး တည်ထောင်ထားရသော ပါတီကြီးမှာ မိတ္ထီလာအရေးတွင် ပါတီမှ တာဝန်ရှိလူတစ်ဦးမှ စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြောဆိုသည်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကတွင် နာမည်ကျခဲ့လေသည်။ (ကိုရင်ရှူံးသိသည့် နိုင်ငံရေးသာဖြစ်သည်။)
(ဆက်ရေးချင်ပါသေးသည်.. တစ်ရက် ၁၅ နာရီလုပ်နေရသည့်အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါကုန်)
ဗရာကြော်ကိုရင်ရှုံး.. တနေ့၅နာရီသာအိပ်ရသဖြင့် ဆက်မန့်ချင်သေးသော်လည်း…
၂၀၁၅မှာ.. ဘယ်သူတက်မလည်းမှန်းတာလား..ရေးတာလား.. မဲထည့်ဖို့..မဲဆွယ်တာလားဟင်င်…။
လက်ရှိသမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့က.. နိုင်ငံခြားရောက်ရှိသမျှ မြန်မာလူတော်ပညာတတ်တွေ.. ဆွဲစေ့နေထားပေမယ့်.. ဒီချုပ်ကျတော့.. ဘာတွေမာနတက်နေသလည်းမသိ…
၂၀၁၅ ဒီချုပ်နိုင်ပြီး.. အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်ရင်တောင်…
၀န်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတခု.. လူထောင်သောင်းအုပ်ချုပ်ကြီးကြပ်နိုင်တဲ့သူ ၃၇ယောက်ရှိရဲ့လားတောင်.. သံသယဖြစ်မိရဲ့..။
ကွိ..ကွိ… ဖို့ရယ်ဖြင့်..မြင်…။ :buu:
တစ် နှစ် ~~~~
သုံး လေး ~~~~~
အတည်ပြောချင်တာတွေ ဖန်တရာတေလို့ မပြောတော့ဘူး။
အမြဲချစ်ရမဲ့ သုံး နဲ့ လေးကို ပဲ မျှော် တော့ မယ်။
၀င်ပေါက် တစ်ပေါက်ထဲဆိုတာက ရန်ကုန် လို့ ဆိုလိုရင် ၀င်ပေါက်က နှစ်ပေါက်ကြီးများတောင် ဖြစ်သွားပြီ ကိုရှုံး ရဲ့ .. ဘန်ကောက် -မန္တလေး air asia , Myanmar Airways နဲ့ Thai smile ဆိုပြီး သုံးလိုင်း ပြေးနေပြီ ..
ဘွားတော်ကြီးကို အချစ်ပိုတယ်လို့ပဲ ပြောပြော :harr:
(သူ့ပါတီမှ တာဝန်ရှိလူတစ်ဦးမှ စည်းလွတ်ဝါးလွတ် ပြောဆိုသည်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုဖြင့် နိုင်ငံရေးလောကတွင် နာမည်ကျခဲ့လေသည်။)
လို့ ဆိုရင် နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ တနိုင်ငံလုံးက ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ ၀န်ကြီး ၀န်လေးတွေရဲ့ စကားတွေကိုရော တာဝန်ယူမှုရှိပါသလားလို့ ဆန်းစစ်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
1500 ကျပ်နဲ့ ရောင်းမှာက..
တစ်လကို အလုံးရေ. သုံးသိန်းခွဲ…
တတိုင်းပြည်လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ ဆို… ရန်ကုန်မှာ တစ်မြို့နယ်ကို…အလုံးရေ.. 750 လောက်ပဲ.ရမယ်ဒဲ့
ပီးဒေါ့.. ဟိုအဖွဲ့တွေရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ရောင်းပေးမှာဒဲ့ 
နိုင်ငံဂျားအထိ ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး… တစ်လုံးမှ 1500 ထဲရှိုဒေါ့….
အဲဒီ အဖွဲ့တွေထဲက အညိုးတွေ..နဲ့ ..ကို…မလောက်နိုင်ဘူး..ထင်ပါရဲ့ 
လုကြ..မှာ မြင်ယောင်မိပါရဲ့ .
ယွေးကောက်ပွဲက လိုပါသေးတယ်။ ဘချုပ်ကြီး ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး ဘယ်သူနိုင် ဘယ်သူရှုံး ဖြစ်လာမှာ။ ပြောလို့ရတာ ဘွားဒေါ် နိုင်ငံရေးသိက္ခာ ဆက်ကျနေဖို့များတယ်။ သမဒဂျီး သိက္ခာတက်နေမလားဆိုတော့လည်း သူ့မှာအာဏာရှိနေလို့သာ အကောင်းပြောနေတာ။ တကယ်တန်း တိုင်းပြည်မှာ ပြောင်းလဲမှု မယ်မယ်ရရ မမြင်မတွေ့မသိမရှိ………။ နိုင်ငံခြားက ချေးငွေ ထောက်ပံ့ငွေတွေနဲ့ လူစွာလုပ်နေ လခတိုးပေးနေ အရန်ဆန်တွေဝယ်နေ လုပ်နေတာ။ သူ့အတိုင်းသာဆို ဒုံရင်းကဒုံရင်း…
htunwin aung says: